100G / 200G / 400G Active Optical Cables
Low Cost Optical Engine Design uye Vertical Integration Process Capability
Nekuvimbika kwekuedza kubva maawa 168 kusvika kumaawa e500, kwete kungoshanduka kweiyo optical simba parameter iduku, asi kunzwisisika kuri kuve nani uye kwakanaka nekuwedzerwa kushanda kwenguva yekuedza. Kuwanikwa uku kunovhiringidza nhepfenyuro yezvakaitika zvekugadzirwa kwekugadzirwa kwezvinhu.
Mhedzisiro yakawanda yekutenderera kwetsika kuvimbika ndeyokuti kushanda kwechibereko kunowedzera kuipa nekuwedzerwa kwenguva yekuvimbika yekuedza, uye zvino yava pedyo necheka.
asi Gigalight inotora mhedziso imwechete kuburikidza nekudzokororazve kwemugadziririmu wemukati wemuviri wekutengesa mushure mekuchinja mamiriro ekuedzwa
Mhinduro dzekuedza dzinoratidza kuti:
100G COB tekinoroji inogona kupfuudzwa kuburikidza nemayero yekuvimbika kwemaindasitiri. Naizvozvo, hatidi kuderedza kuvimbika kunodiwa nekuti data hombe riine nharaunda zvirinani pane kutaudzana nefoni.
2) 100G air tightness design inogona kuvandudza kushanda kwenguva refu kuburikidza nekuvimbika kuedza. Izvi zvinoratidza kuti kuvimbika chinhu chinokosha panzvimbo pekudzivirirwa mukati mekugadzira 100G.
Kubatsirwa kweCOB Packaging
COB tech inotarirwa kuderedza mari nekuchengetedza mari. Pamusana peiyo isina kufuka IC chip inonyatsobatanidzwa pane bhidhiyo redhiro rakashandiswa, risina kupatsanura zvakapetwa kweC chip chip, kuitira kuti mari yacho iwedzere. Uye kuita mutambo wekubatanidza wedunhu zvakananga pane IC chip inochengetedza mari yakawanda kupfuura yakakura yepurasitiki. Saka, COB tech inotanga kukurudzirwa kune inovandudzwa IC chip.
Nokuda kwekuti IC chip ishoma kudarika zvikamu zvinotungamirira nzvimbo, COB ine zvikomborero zvakakosha munzvimbo yekuchengetedza. Uwandu hwetambo yehuni chiping kunze kweI IC pakatengesa iduku kudarika iyo ye-double-in-line packaging, inofukidza nezve 1 / 4, ichichengetedza nzvimbo yakawanda kupfuura Kutakura Chip Carrier (LCC) pakuchengeta, kuderedza uswa. COB tech inogonawo kushandiswa mumasimiro ekushandira kuti mamwe mabhuku haana nzira yekuita nayo.
Ne coefficient of thermal expansion pakati pekuisa chisimbiso uye kushandiswa kwebhodhi redhiro rinowirirana, kutendeseka kuchavandudzwa zvakare. Munguva yakapfuura, nekuda kwekusava nemafungiro emagetsi ekuwedzera kwekushisa pakati pevharivha nekodhindwa bhodhi remaseri, kunetseka kwakanyanya kunowanikwa munharaunda yekunamatira pakati pe chip uye kushandurwa bhodhi redu. Nekuvandudzwa kwekuisa mucherechedzo zvinhu, nyaya iyi haisi pachena. Saka, COB tech ndiyo inonakidza mune mamwe masimi.
Muchikamu che semiconductor tech, inoshandiswawo kune tech COB. Nhengo ye CMOS ine simba rekusimba simba rinonyanya kukodzera tech yeCOB ine simba risina simba. Panguva imwe chete, pamwe neC chip chip yakagadzirirwa kutarisa kushandiswa kwekushandisa uye semi-consumption, COB tech inonyanya kukosha.
Nzira dzakawanda dzakabatanidzwa muCOB tech dzinokwanisa kuona kugadzirwa kwemhando. Mushure maizvozvi, vazhinji vanogadzirisa vachave vachifarira zvikuru COB tech.